Basikety – «Afrique 2018»: indroa resy ny MB2 All - ewa.mg
Basket - News - Sport - Basikety – «Afrique 2018»: indroa resy ny MB2 All
Ratsy fiditra ny MB2 All, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy vehivavy, taranja basikety (CACC). Fihaonana, tanterahina any Maputo, renivohitr’i Mozambika. Faharesena indroa nisesy mantsy no azon’ny ekipa malagasy, teo amin’ny fifanintsanana ho an’ny vondrona “B”.
Lavon’ny First Bank, avy any Nizeria, tamin’ny isa, 74 no ho 40 ny ekipan’i Ndranto sy i Erick, teo amin’ny andro voalohany. Nanatombo teo amin’ny traikefa sy ny haben’ny vatana ny Nizerianina. Nitarika hatrany izy ireo, teo amin’ireo tapa-potoana efatra nilalaovana.
Tsy mbola afaka ihany koa ny MB2 All, teo amin’ny andro faharoa, notanterahina omaly, satria niondrika teo anatrehan’ny Institut national sécurité sociale (CNSS), avy any ammin’ny Repoblika Demokratikan’i Kongo, tamin’ny isa mazava, 71 no ho 51. Ry zareo Kongolezy, efa zatra fifaninanana iraisam-pirenena. Mila mandresy ny MB2 All, eo amin’ireo lalao roa farany, hatrehin’izy ireo. Hidona amin’ny Kenya Ports Authority, ny MB2 All, rahampitso ary hifanandrina amin’ny Lakers de Zimbabwe, eo amin’ny lalao farany, ny alarobia.
Basikety - MB2 All
Ligue 1 – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC ( 0-2 )
Misaona tanteraka ny tontolon’ny Fanatanjahantena eto Madagasikara. Mpanao fanatanjahantena telo mirahalahy be izao no indray maty, ny faran’ny herinandro teo. Andrianafetra Faly “Le Roi Lion”, eo amin’ny taranja familiana fiarakodia, i Maitre Mamy, ho an’ny taranja taekwondo ary Rafalimanana Jhonny Patrick (Rasta), taranja rugby. Ireo ny andrarezina eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena indray na­moy ny ainy. Tsy mifidy saranga ny Covid 19 fa na mpanao fanatanjahantena matanjaka aza dia tsy amelany. Raha ny an­gom-bavao voaray mantsy, voamarina fa noho ny tsimokaretina Coronavirus no nahalavo an’ Andrianafetra Faly na i Le Roi Lion, izay avy hatrany dia nalevina omaly ihany. Olobe teo amin’ny sehatry ny fanamoriana fiarakodia izy satria ankoatra ny maha filoha lefitry ny FSAM (Fé­dération du Sport Automo­bile de Madagascar) azy dia efa nandrombaka ny anaram-boninahitra ho tompondakan’i Ma­dagasikara imbetsaka i Faly be. Ny fiara P.504, P.106 ary P.206 ny efa nifandimbiasany nentina tamin’izany. Efa hita teo amin’ny sehatry ny politika ihany koa Andrianafetra Faly. Efa kandidà ho ben’ny Tanànan’Atsimon­drano, tao amin’ny antoko TIM, tamin’ny fifidianana farany teo ny tenany. Raha ny momba an’i Maitre Mamy indray, dia tsy nisy tsy nahafantatra azy ny teo amin’ny taranja taekwondo. Nanomboka niditra teo amn’ity taranja ity izy, ny taona 2001, tao klioban’ny Horinu Sansu ary ny sokajin-danja teo anelanelan’ny 72kg hatramin’ny 78kg no nisy azy. Tamin’ny 2010 kosa no lasa mpitsara ary saika hita nandray anjara hatrany teo amin’ny lafin’ny fitsarana ireo fifaninanam-pirenena sy ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, tamin’ny taona 2012. Namela mananotena sy kamboty roa i Maitre Mamy. Mahakasika an-dRafali­manana Jhonny Patrick na i Rasta kosa, izay fantatry ny maro teo amin’ny taranja baolina lavalava, 34 taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Ny toeran’ny “2ème ligne” sy “3ème ligne” tao amin’ny klioban’ny XV family ny nisy azy.Tao amin’ny fileovana Andranomanalina no nilalaovany fony sokajy junior ary nifindra tao amin’ny XV family taorian’izany ka hatramin’izao. Raha ny nambaran’ny olona akaiky azy, tampoka ihany ny fahafatesany. Mbola natanjaka tsara izy, ny alakamisy lasa teo ary nitaraina ho narary vavony kosa anefa taorian’izay ka izao nitarika hatramin’ny fahafatesany izao. Tsy mbola voamarina tsara, araka izany, izay tena nahafaty ireto roa lahy farany ireto. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’izy telo mirahalahy.Mi.RazL’article Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena: kalaza telo mirahalahy indray maty a été récupéré chez Newsmada.
Voka-dalao 9 Decembre 2018 – Rіvеr Ρlаtе vs Воса Junіоrѕ 3−1
Voka-dalao 7 Decembre 2018 – Philadelphia Sixers vs Detroit Pistons
Pistons / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Griffin 38 7/15 0/2 17/24 2 10 12 6 5 0 4 0 31 30 A. Drummond 34 7/19 0/1 7/7 5 5 10 0 2 2 1 2 21 22 R. Jackson 34 5/13 1/5 2/2 1 3 4 5 3 2 4 1 13 13 G. Robinson III 16 2/7 1/3 0/0 2 1 3 0 1 1 1 0 5 3 B. Brown 32 3/5 1/2 0/0 2 3 5 3 2 0 2 0 7 11 J. Leuer 10 1/1 0/0 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 2 7 Z. Pachulia 14 2/5 0/1 4/4 3 2 5 3 3 1 1 0 8 13 J. Calderon 14 3/5 1/2 0/0 0 0 0 1 0 2 1 0 7 7 L. Galloway 31 5/15 2/9 0/0 2 3 5 1 4 1 1 0 12 8 L. Kennard 18 2/4 1/3 0/0 0 3 3 1 3 0 1 0 5 6 Total 37/89 7/28 30/37 17 32 49 22 24 10 16 3 111 76ers / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval W. Chandler 37 4/5 2/3 0/0 1 7 8 2 5 2 0 3 10 24 A. Johnson 16 0/2 0/1 0/0 0 2 2 0 6 3 2 0 0 1 B. Simmons 40 8/11 0/0 2/2 4 10 14 6 3 1 4 3 18 35 J. Redick 34 5/18 2/10 6/6 0 2 2 5 3 0 2 1 18 11 J. Butler 39 13/27 1/6 11/12 5 1 6 6 1 3 0 1 38 39 M. Muscala 30 7/13 4/9 0/0 1 2 3 2 5 1 2 3 18 19 J. Bolden 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 L. Shamet 16 1/3 0/1 1/1 0 1 1 0 3 0 1 0 3 1 T.J. McConnell 21 5/7 0/0 0/0 0 1 1 5 0 0 3 0 10 11 F. Korkmaz 4 1/4 0/2 0/0 1 2 3 0 1 1 1 1 2 3 Total 44/90 9/32 20/21 12 28 40 26 28 11 16 12 117
NBA – Voka-dalao 6 Decembre 2018 – Boston Celtics vs New York Knicks
Celtics / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Morris 30 5/13 0/7 0/0 0 3 3 2 2 1 0 0 10 8 J. Tatum 26 7/11 3/5 0/0 1 4 5 2 2 2 1 0 17 21 A. Horford 28 8/12 0/0 3/3 2 10 12 3 3 0 2 4 19 32 K. Irving 30 9/15 3/6 1/2 1 3 4 8 2 0 2 1 22 26 M. Smart 24 2/8 0/5 0/0 1 1 2 7 2 2 0 0 4 9 S. Ojeleye 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 G. Yabusele 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 D. Theis 17 4/7 0/1 2/2 2 1 3 0 3 0 1 0 10 9 G. Hayward 25 2/6 2/3 2/2 0 6 6 4 1 0 0 0 8 14 A. Baynes 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Rozier 24 3/7 3/6 2/2 0 7 7 4 4 2 1 1 11 20 B. Wanamaker 3 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 J. Brown 25 7/10 0/2 7/9 0 3 3 2 5 0 2 0 21 19 Total 49/92 13/38 17/20 7 39 46 32 24 8 9 6 128 Knicks / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Vonleh 34 4/5 1/1 3/4 2 8 10 3 0 2 1 0 12 24 M. Hezonja 18 1/4 0/2 1/1 0 3 3 2 2 0 2 0 3 3 E. Kanter 24 7/12 0/0 0/0 5 6 11 1 3 0 1 1 14 21 E. Mudiay 34 5/15 2/4 5/5 1 1 2 6 4 0 3 1 17 13 T. Hardaway Jr. 33 7/19 6/13 2/2 1 0 1 2 2 1 3 0 22 11 L. Kornet 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 K. Knox 25 4/12 2/6 1/2 1 3 4 2 1 0 2 0 11 6 M. Robinson 21 3/4 0/0 1/2 4 4 8 1 4 0 1 2 7 15 C. Lee 10 1/3 1/2 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 3 5 A. Trier 18 2/5 0/0 2/2 0 2 2 2 3 0 2 0 6 5 D. Dotson 20 2/11 0/6 1/2 0 3 3 0 2 1 1 0 5 -2 Total 36/91 12/35 16/20 14 33 47 21 23 4 16 5 100